Hoy Ravalomanana hoe... | Hevitra MPANOHARIANA |
Hoy Ravalomanana hoe...
2014-11-01 @ 10:58 in Politika
Raha mahatsikaritra ny Malagasy mpanara-baovao indrindra ireo mpanohana an-dRavalomanana Marc dia misy karazan'olona mpamerimberina io fiteny io. Fomba fitenin'ny sasany amin'ireo lohandohan'ny mpisorona na akaiky ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ireo heverina ho mpanohana io olona voatonona anarana io izany fanombohana fehezanteny izany hampandresena lahatra ireo sarambaben'ny mpanohana na hanapahana hatreo ny adihevitra amin'ny dingana manaraka tokony atao.
Hoy Ravalomanana hoe... Tahaka ny hoe nifampiresaka manokana ry zareo nefa tsy fantatra hoe taiza no nifampiresahana sady tsy misy finday ifampiresahana intsony any amin'ilay olona nolazaina fa niteny. Na iza na iza miteny toy izany dia karazany efa milaza mialoha sahady ny ao an-tsaiko ao hoe inona indray ny lainga holazain'ity olona ity? Tsy manana fomba hafa entina hanamarinana ny heviny sy izay tokony atao ireo karazan'olona ireo dia lazaina fotsiny ilay fanombohana fehezanteny.
Hoy Ravalomanana hoe... Tsy mandeha irery ny lainga fa misy tanjona ao ambadiky ny lainga apetraka mba handehanan'ireo mpanaraka ny mpomba an-dRavalomanana Marc any amin'ny lalana tsy izy mihitsy sy sarotra ivoahana ary natao hahapotika tanteraka ny lazan'ilay olona. Raha tsorina dia araka ilay fomba fiteny iray manao hoe "mampidi-kizo". Amin'izao fotoana izao dia ezahana fatratra ny hanadinoana tsimoramora ilay gadra atokan-toerana tsy avela hifandray amin'ny hafa.
Hoy Ravalomanana hoe... Ny mpamerin-teny matetika dia ireo efa manana toerana eo amin'ny fitondrana, na ao amin'ny iray amin'ireo andrim-panjakana ijoroan'ny firenena, tsy ilay toeram-boninahitra voalohany fa ilay eo ambanimbany kely eo. Mifikitra mafy amin'ny sezany, tahaka ny hoe votsotra io seza io raha vao tsy manao izay fitapitaka izay. Efa dridran'Ingilo anefa ilay fitenenana ka efa tsy mahataitra ny olona intsony, na izay koa no tanjona hoe tsy henoin'ny olona intsony izay lazain-dRavalomanana avy amin'ilay fanomboham-pehezanteny "Hoy Ravalomanana hoe..."
Hatreto ny teny farany nataon-dRavalomanana azon'ny rehetra hamarinina dia ny nandritra ilay valan-dresaka irery ihany tamin'ny fotoana nahatongavany teto Madagasikara. Tsy misy ny ankoatra izay. Famadihana tanteraka ny tolona ilay mbola mifikitra amin'ny fanohanana ilay fitondrana nefa fitondrana managadra sy manosihosy tanteraka ny zon'ilay olona nataonareo tohatra fiakarana hahazoanareo seza ny anarany. Tsarovy fa tsy noho ianao loatra no nifidianan'olona anao nandritra ny fifidianana fa noho ilay anaran'olon-kafa isaloranao. Mba hatraiza moa hatreto ny fifampiraharahana vitanareo tamin'ilay fitondrana mpanatanteraka efa zatra mametrapetraka sy mampiesona anareo? Fa dia inona loatra ny fifamatorana misy ao aminareo ao no dia mandrimandry manana aretina ianareo? Hiandry ny hanehoan'ny olona (mbola tsy miala amin-dRavalomanana) ny fankahalany tanteraka anareo ve ianareo vao ho taitra?
Hatreto dia fitakiana ny hamerenana ny fitsarana 7 febroary 2009 sy ny raharaha nialoha azy dia ny 26 janoary 2009 no takiako satria ao anatin'izany ny takian'ny filoha Ravalomanana. Tadiavina amin'izany fotsiny ilay hoe meloka tamin'ireo raharaha roa ireo ve izy? Tsy ilaina ny miampanga olona hafa ao anatin'izany fa ny ifandraisan-dRavalomanana amin'ny raharaha 7 febroary 2009 fotsiny no takiana. Dia takiana ihany koa ny itsarana an-dRavalomanana amin'ny raharaha 26 janoary 2009. Ankehitriny manko atao siosio tahaka ny "Hoy Ravalomanana hoe..." fa ilay fidirany teto Madagasikara lazaina fa "an-tsokosoko" ihany no itsarana azy.
Rahatrizay ka raha mbola ao anatin'ny fe-potoana azo ametrahana fitoriana ireo raharaha roa ireo, ka mivadika tampoka indray ny kodiaran-tsarety dia toriana amin'izay ireo olona nitarika ny hafa handroba sy handoro ny haino aman-jerim-panjakana sy ireo nitarika ny hafa hovonoina ao anaty fandriky ny araben'Antaninarenina manoloana an'Ambohitsorohitra. Tsy toy ny tamin'ny 1991 ny tamin'ny febroary 2009 ka efa nilazana mialoha ireo mpitolona rehetra fa hanao diabe hankany amin'ny Lapan'Iavoloha ka ireo mpitolona no mieritreritra na tokony handeha na tsia, fa ny tamin'ny 2009 nofitahana tamin'ny hoe hanafana ny fotoana hihira ao i Rossy. Ny sarambaben'ny olona no nofitahina fa ireo mpanentana ao amin'ny haino aman-jery tamin'izany fotoana izany no nampita ny hafatra miafina hoe "Operation Miraflorès". Fa inona ilay "Operation Miraflorès" na ataontsika hoe Bemidina Miraflorès? Lapam-panjakana iasan'ny filoha Venezoelana ny resaka ao ambadika ary ny raharaha nitranga tao tamin'ny 2002 no tena tiany hahatongavana. Tsarovy fa tsy adinonay ny tantara, raha raha tsy azonareo mpamaky moa ny tiako lazaina dia mety hanaovana lahatsoratra manokana ihany koa izany.
Jentilisa 1 novambra 2014
PS: toa efa nanoratra io Miraflores io aho fa mbola hokarohiko.